Uvimba-mpepha Wemibuzo Edlulileyo-Iindaba ZeSikolo Sangoku: Iindaba ZeSikolo Sangoku
Isikolo se-OAUTHC sobuNesi imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Kufakwe kuyo Imibuzo edluleyo by Abasebenzi ngoJulayi 14, 2021	• 0 Comments
Khuphela i-OAUTHC yeSikolo saBongikazi kwiMibuzo edlulileyo yokwenza uvavanyo lwe-2021 apha. Kukho imibuzo edlulileyo kunye nezikhokelo zeempendulo onokuzifumana kwindlela imibuzo yovavanyo eyenzeka ngayo. Kule nqaku, uya kufunda ukuba phi / njani ukufumana i-OAUTHC yeSikolo soMongikazi kwimibuzo edlulileyo kunye neempendulo. Kananjalo, esi sikhokelo sibanzi sikunika ukufikelela […]
I-Ogbomoso School of Nursing Imibuzo edlulileyo ye-2020 kunye neempendulo zokuKhuphela Simahla
Khuphela iOgbomoso School of Nursing Umbuzo odlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi yeSikolo i-Ogbomoso yeSikolo Sobuhlengikazi kwimibuzo edlulileyo yovavanyo lokujonga imeko lowama-2021? Khangela kwakhona! I-Ogbomoso School of Nursing imibuzo kunye neempendulo ezidlulileyo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala uviwo lokungena. Isikolo iOgbomoso […]
I-Birnin Kebbi Isikolo Sabahlengikazi Imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo lwasimahla
Khuphela i-Birnin Kebbi School of Nursing Umbuzo oDlulileyo- Ngaba okwangoku ukhangela i-intanethi yeBirnin Kebbi School of Nursing Imibuzo edlulileyo yovavanyo luka-2021? Khangela kwakhona! Imibuzo kunye neempendulo ze-Birnin Kebbi School of Nursing kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala i-Entrance […]
I-Umahia Isikolo Sobuhlengikazi Imibuzo Edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Khuphela i-Umahia School of Nursing Umbuzo oDlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi ye-Umahia School of Nursing imibuzo ye-2021 yovavanyo lokuhlola? Khangela kwakhona! I-Umahia School of Nursing imibuzo kunye neempendulo ezidlulileyo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala uviwo lokungena. Isikolo i-Umahia se […]
I-Akure School of Nursing Imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Khuphela iAkure School of Nursing Umbuzo odlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi ye-Akure School of Nursing Imibuzo edlulileyo yovavanyo lokuhlola lwe-2021? Khangela kwakhona! I-Akure School of Nursing imibuzo edlulileyo kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukhuphelo kubo bonke abaviwa abaza kubhala uViwo lokuNgena. Isikolo saseAkure […]
Isikolo i-Anua-Uyo sobuNesi semibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Khuphela i-Anua-Uyo School of Nursing Umbuzo odlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi Isikolo se-Anua-Uyo Sobuhlengikazi Imibuzo Edlulileyo, i-Uyo yovavanyo lokuhlola lwe-2021? Khangela kwakhona! Imibuzo kunye neempendulo ze-Anua-Uyo ze-Nursing kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala uviwo lokungena. Isikolo iAnua-Uyo se […]
UBTH School of Nursing Imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Kufakwe kuyo Izihloko zeProjekthi yeMfundo yaBadala, Imibuzo edluleyo by Abasebenzi ngoJulayi 14, 2021	• 0 Comments
Khuphela i-UBTH School of Nursing Umbuzo oDlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi kwisikolo se-UBTH seMfundo yaBongikazi kwimibuzo edlulileyo yovavanyo lwe-2021? Khangela kwakhona! I-UBTH School of Nursing imibuzo edlulileyo kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukhuphelo kubo bonke abaviwa abaza kubhala uViwo lokuNgena. Isikolo i-UBTH […]
Isikolo se-FCT Sobuhlengikazi Imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo zokuKhuphela Simahla
Khuphela i-FCT School of Nursing Umbuzo odlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi ye-FCT School of Nursing Questions, Gwagwalada yovavanyo lokuhlola lwe-2021? Khangela kwakhona! I-FCT School of Nursing imibuzo edlulileyo kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala uviwo lokungena. Ulwazi olufutshane malunga […]
ESUTH Isikolo Sobuhlengikazi Imibuzo edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Khuphela i-ESUTH School of Nursing Umbuzo odlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi kwiSikolo se-ESUTH seMibuzo yaBadala, i-Enugu ngovavanyo lwango-2021? Khangela kwakhona! I-ESUTH School of Nursing imibuzo kunye neempendulo ezidlulileyo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala uviwo lokungena. Ulwazi olufutshane malunga […]
Isikolo Esingcwele Sentliziyo Esibhedlele Sabahlengikazi Imibuzo Edlulileyo 2021 kunye neempendulo uKhuphelo simahla
Kufakwe kuyo Imibuzo edluleyo by Abasebenzi ngoJulayi 14, 2021
Khuphela iSikolo esingcwele seSibhedlele sentliziyo soMbuzo oDlulileyo: Ngaba ngoku ukhangela i-intanethi kwiSikolo seSibhedlele sentliziyo esingcwele seMibuzo edlulileyo yovavanyo lokuhlola lwe-2021? Khangela kwakhona! Imibuzo kunye neempendulo zeSibhedlele Sentliziyo Esingcwele kwiminyaka edlulileyo kunye neempendulo ngoku ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe kubo bonke abaviwa abaza kubhala […]